ထောင်ထဲမှာ ကျန်းမာရေးဆိုးရွားနေတဲ့ ရဲတိုက်ရဲ့အကြောင်းကို ၀မ်းနည်းစွာ ပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေ – Cele Posts
ထောင်ထဲမှာ ကျန်းမာရေးဆိုးရွားနေတဲ့ ရဲတိုက်ရဲ့အကြောင်းကို ၀မ်းနည်းစွာ ပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေ
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…သူမတူတဲ့ ဟန်ပန် သရုပ်ဆောင် ပိုင်နိုင်မှု တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ မင်းသားချောရဲတိုက် ကတော့ လက် ရှိမှာ အကျဉ်းချအရေးယူခြင်း ခံထားရတာကို အားလုံးသိရှိကြမှာပါနော်..။​ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းတွေက တည်းက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ရဲတိုက်ကတော့ အကျဉ်းကျနေရင်း လတ်တလော မှာလည်း ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့ သိပါတယ်..။
ရဲတိုက်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေတွေ ကိုတော့ ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေက ပြောပြထားတာဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပီသတဲ့အပြင် အရေးတော်ပုံကြီးမှာလည်း ရှေ့ဆုံးထိထွက်လာပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြထားပါသေးတယ်. .။ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရသလို ရဲတိုက် အတွက် တတ်နို င်သ လောက် speak out လုပ် ပေးကြ ဖို့ကို လည်း ဒါရိုက်တာသည်ခေတ်နေက တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
“သူထောင်ထဲမှာ ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူး ကြားတယ် သူပြန်လွတ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ ဖုန်း၃ကြိမ် လောက် စကားပြောဖူးရုံကလွဲလို့ သူနဲ့ကျွန်တော် ဆုံမယ်ဆုံမယ်နဲ့ ခုထိလည်းမဆုံဖြစ် ခဲ့ကြပါဘူး။သူ့ရဲ့အနုပညာ၊သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင် တွေ မစခင်- ဟိုးဗီဒီယိုခေတ်ဦးတ ည်းက ဆာတိုရီဆိုတာ ဗီဒီယိုလေးတစ်ကားကို ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကားလို သေသေချာချာပြင်ဆင်ပြီးမှ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကုမ္မဏီကြီးတစ်ခုပါ။(အဲ့အချိန်ကျွန်တော်က ဇာတ်ညွှန်းသုံးလေးပုဒ် စရေးခါစ။တစ်နေ့ငါဒါရိုက်တာဖြစ်ရင် ဒီဘဲတွေနဲ့ရအောင်ရိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ ။)
ရဲတိုက်ဆိုတာ ဆာတိုရီရဲ့တပင်တိုင် မင်းသား။ရဲတိုက်မှ ရဲတိုက်ခေတ်။သူ့ဇာတ်လမ်းတွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမပြောနဲ့။ သူရိုက်ခဲ့တဲ့ကြော်ငြာတွေမှာတောင် အိုင်တင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မထပ်စေရဆိုတဲ့ ပါရမီအလိုလိုပါလာတဲ့သူ(ဒါမှမဟုတ်)ရုပ်ရှင်ဆီ သူချဉ်းကပ်ပုံကိုက သူတစ် ပါး နဲ့မတူတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ထားပါ…အဲ့ဒီနောက်မှာတော့-အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရဲတိုက်နေရာမှာ ဆာတိုရီအတွက် နောက် ထပ်သ ရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်… (သူလည်း သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိပြီး တကယ်ကြိုးစားအောင်မြင်နေတဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲ။)
ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်လို့ပဲပြောပြော…ကျွန်တော်မျှော်နေမိ တာက ရဲတို က်အပြင်ကိုပြန်ရောက်လာမယ့် အချိန်ပါ။ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေနဲ့ ရဲတိုက်ဇာတ်ကားတွေပြန်ကြည့်ရမယ့်အချိန်တ စ်ခုရယ်။ပြီးတော့ သူနဲ့ကျွန်တော် အလုပ်အတူတွဲလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုပေါ့။(ဖြစ်နိုင်ရင် အဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ထိမျှော်လင့်နေမိသေးတယ်။)ဒီနေ့ထိသူ့အနုပညာကိုကျွန်တော် အရမ်းလေးစားပါတယ်။အခုလို သူထောင်ထဲမှာကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတာကြားရတော့ စိတ်ထဲတော်တော်မကောင်းဘူး။သူက သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး …
သူကြိုက်တာသူ လုပ်ခဲ့တာတော့ မှန်ပါလိမ့်မယ်။သူကြိုက်တာတွေ လုပ်နေရင်းနဲ့တောင် သူလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး တစ်ခုကိုကြည့်ရင် ပြည်သူတွေရဲ့ကြားထဲကနေ ရှေ့ဆုံးထိရောက်အောင်ထွက်လာပြီး အာဏာရှင်ကိုဖီဆန်ခဲ့တာ အားလုံးအမြင်ပဲလေ။စစ်အာဏာရှင် စနစ်အမြန်ဆုံးပြုတ်ကျသွားခဲ့ရင်တောင် ဒီမိုးဒီလေနဲ့ ရဲတိုက်နောက်တစ်ယောက်ထပ်ရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက် မကျိန်းသေတော့ပါဘူး။ ဒီတစ်ကြိမ်သူပြန်လာလို့ သူကိုယ်တိုင်ကလဲ သူလုပ်ဖူးနေကျအရာတွေအပေါ် သူ့စိတ်သူနေနို င်သွားအောင် ကြိုးစားလို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ အရာအားလုံးက အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်အခုသူ့ကိုချီးကျူးနေတာအကုန်လုံးက သူ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အနုပညာနဲ့ သူတန်ဖိုးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီ အတွက် သတ် တိရှိတဲ့သူ့လု ပ်ရပ်ကိုပဲ ဆိုလိုတာပါ။သူ့ကို ပြည်သူတွေ ဒီထက်ဝန်းရံပေးစေချင်တယ်။ဒီအချိန်မှာ အကုန်လုံးကကိုယ်စီသောကကြီးနေပေမယ့် သူ့လို လူတော်တစ်ယောက်ကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် speak outလုပ်ပေးကြပါခင်ဗျား။
ရနိုင်သလောက် ဂရုစိုက်ပေးကြပါခင်ဗျား။🙏🙏🙏(သူ့အတွက် ကျွန်တော်အ ဓိကတောင်း ဆိုချင်တာတစ်ခုရှိ ပါသေးတယ်။အားလုံးကိုယ်စား သူ့ဆီရောက်အောင်သွားတွေ့ပေးနိုင်မယ့်လူတစ်ယောက်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုcbကနေ ဆက်သွယ်ပေးပါလား ခင်ဗျား ! ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း နယ်မှာရောက်နေလို့ပါ။သူ့အတွက် ကျွန်တော် နိုင်တာလေးကူညီပေးရင်း သူပြန်လာရင် သူနဲ့ရိုက်ဖို့ဇာတ်လမ်းလေးတစ် ပုဒ်ရှိတဲ့ အကြောင်းမှာလိုက်ချင်လို့ပါ…..။)..” ရေးသားပြောပြထားတာပါ..။ပရိသတ်တွေကလည်း ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေနဲ့အတူ ရဲတိုက်အတွက် ဆုတောင်းစကားတွေနဲ့ အားပေးထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ထောငျထဲမှာ ကနျြးမာရေးဆိုးရှားနတေဲ့ ရဲတိုကျရဲ့အကွောငျးကို ဝမျးနညျးစှာ ပွောပွလာတဲ့ ဒါရိုကျတာ သညျခတျေနေ
ပရိတျသတျကွီးရေ…သူမတူတဲ့ ဟနျပနျ သရုပျဆောငျ ပိုငျနိုငျမှု တှကွေောငျ့ ပရိသတျတှေ အခိုငျအမာနဲ့ အောငျမွငျနတေဲ့ မငျးသားခြောရဲတိုကျ ကတော့ လကျ ရှိမှာ အကဉျြးခအြရေးယူခွငျး ခံထားရတာကို အားလုံးသိရှိကွမှာပါနျော..။​ပွီးခဲ့တဲ့ လပိုငျးတှကေ တညျးက ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ ရဲတိုကျကတော့ အကဉျြးကနြရေငျး လတျတလော မှာလညျး ကနျြးမာရေးမကောငျးဘူးလို့ သိပါတယျ..။
ရဲတိုကျရဲ့ လကျရှိ အခွအေနတှေေ ကိုတော့ ဒါရိုကျတာ သညျခတျေနကေ ပွောပွထားတာဖွဈပွီး အနုပညာရှငျ တဈယောကျပီသတဲ့အပွငျ အရေးတျောပုံကွီးမှာလညျး ရှဆေုံ့းထိထှကျလာပွီး အတတျနိုငျဆုံးကွိုးစားပါဝငျလှုပျရှားခဲ့တဲ့ အကွောငျးတှကေို ပွောပွထားပါသေးတယျ. .။ ကနျြးမာရေးမကောငျးတဲ့ စိတျမကောငျးဖွဈနရေသလို ရဲတိုကျ အတှကျ တတျနို ငျသ လောကျ speak out လုပျ ပေးကွ ဖို့ကို လညျး ဒါရိုကျတာသညျခတျေနကေ တိုကျတှနျးတောငျးဆိုထားတာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။
“သူထောငျထဲမှာ ကနျြးမာရေး မကောငျးဘူး ကွားတယျ သူပွနျလှတျလာတဲ့ အခြိနျမှာ ဇာတျကားရိုကျဖို့ ဖုနျး၃ကွိမျ လောကျ စကားပွောဖူးရုံကလှဲလို့ သူနဲ့ကြှနျတျော ဆုံမယျဆုံမယျနဲ့ ခုထိလညျးမဆုံဖွဈ ခဲ့ကွပါဘူး။သူ့ရဲ့အနုပညာ၊သူ့ရဲ့ရုပျရှငျ တှေ မစခငျ- ဟိုးဗီဒီယိုခတျေဦးတ ညျးက ဆာတိုရီဆိုတာ ဗီဒီယိုလေးတဈကားကို ရုပျရှငျကားကွီးတဈကားလို သသေခြောခြာပွငျဆငျပွီးမှ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ကုမ်မဏီကွီးတဈခုပါ။(အဲ့အခြိနျကြှနျတျောက ဇာတျညှနျးသုံးလေးပုဒျ စရေးခါစ။တဈနငေ့ါဒါရိုကျတာဖွဈရငျ ဒီဘဲတှနေဲ့ရအောငျရိုကျမယျလို့ စိတျကူးယဉျကောငျးနတေဲ့အခြိနျပေါ့ ။)
ရဲတိုကျဆိုတာ ဆာတိုရီရဲ့တပငျတိုငျ မငျးသား။ရဲတိုကျမှ ရဲတိုကျခတျေ။သူ့ဇာတျလမျးတှကေ တဈခုနဲ့တဈခုမပွောနဲ့။ သူရိုကျခဲ့တဲ့ကွျောငွာတှမှောတောငျ အိုငျတငျတဈခုနဲ့တဈခု မထပျစရေဆိုတဲ့ ပါရမီအလိုလိုပါလာတဲ့သူ(ဒါမှမဟုတျ)ရုပျရှငျဆီ သူခဉျြးကပျပုံကိုက သူတဈ ပါး နဲ့မတူတာလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ထားပါ…အဲ့ဒီနောကျမှာတော့-အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ရဲတိုကျနရောမှာ ဆာတိုရီအတှကျ နောကျ ထပျသ ရုပျဆောငျတဈဦးပျေါထှကျလာခဲ့ပါတယျ… (သူလညျး သူ့တနျဖိုးနဲ့သူရှိပွီး တကယျကွိုးစားအောငျမွငျနတေဲ့သရုပျဆောငျကောငျးတဈယောကျပါပဲ။)
ကြှနျတျောအနနေဲ့ကတြော့ အစှဲအလမျးကွီးတဲ့ ပရိသတျတဈယောကျလို့ပဲပွောပွော…ကြှနျတျောမြှျောနမေိ တာက ရဲတို ကျအပွငျကိုပွနျရောကျလာမယျ့ အခြိနျပါ။ဇာတျလမျးအသဈတှနေဲ့ ရဲတိုကျဇာတျကားတှပွေနျကွညျ့ရမယျ့အခြိနျတ ဈခုရယျ။ပွီးတော့ သူနဲ့ကြှနျတျော အလုပျအတူတှဲလုပျကွမယျဆိုတဲ့အခြိနျတဈခုကိုပေါ့။(ဖွဈနိုငျရငျ အဲ့အခှငျ့အရေးကိုကြှနျတျောဒီနထေိ့မြှျောလငျ့နမေိသေးတယျ။)ဒီနထေိ့သူ့အနုပညာကိုကြှနျတျော အရမျးလေးစားပါတယျ။အခုလို သူထောငျထဲမှာကနျြးမာရေးမကောငျးဘူးဆိုတာကွားရတော့ စိတျထဲတျောတျောမကောငျးဘူး။သူက သူ့ဘဝတဈလြှောကျလုံး …
သူကွိုကျတာသူ လုပျခဲ့တာတော့ မှနျပါလိမျ့မယျ။သူကွိုကျတာတှေ လုပျနရေငျးနဲ့တောငျ သူလုပျခဲ့တဲ့နောကျဆုံး တဈခုကိုကွညျ့ရငျ ပွညျသူတှရေဲ့ကွားထဲကနေ ရှဆေုံ့းထိရောကျအောငျထှကျလာပွီး အာဏာရှငျကိုဖီဆနျခဲ့တာ အားလုံးအမွငျပဲလေ။စဈအာဏာရှငျ စနဈအမွနျဆုံးပွုတျကသြှားခဲ့ရငျတောငျ ဒီမိုးဒီလနေဲ့ ရဲတိုကျနောကျတဈယောကျထပျရဖို့ဆိုတာကြှနျတျောတို့အတှကျ မကြိနျးသတေော့ပါဘူး။ ဒီတဈကွိမျသူပွနျလာလို့ သူကိုယျတိုငျကလဲ သူလုပျဖူးနကေအြရာတှအေပျေါ သူ့စိတျသူနနေို ငျသှားအောငျ ကွိုးစားလို့ရသှားပွီဆိုရငျတော့ အရာအားလုံးက အတိုငျးထကျအလှနျပေါ့ဗြာ။
ကြှနျတျောအခုသူ့ကိုခြီးကြူးနတောအကုနျလုံးက သူ့ရငျထဲမှာရှိတဲ့အနုပညာနဲ့ သူတနျဖိုးထားတဲ့ဒီမိုကရစေီ အတှကျ သတျ တိရှိတဲ့သူ့လု ပျရပျကိုပဲ ဆိုလိုတာပါ။သူ့ကို ပွညျသူတှေ ဒီထကျဝနျးရံပေးစခေငျြတယျ။ဒီအခြိနျမှာ အကုနျလုံးကကိုယျစီသောကကွီးနပေမေယျ့ သူ့လို လူတျောတဈယောကျကိုတော့ တတျနိုငျသလောကျ speak outလုပျပေးကွပါခငျဗြား။
ရနိုငျသလောကျ ဂရုစိုကျပေးကွပါခငျဗြား။🙏🙏🙏(သူ့အတှကျ ကြှနျတျောအ ဓိကတောငျး ဆိုခငျြတာတဈခုရှိ ပါသေးတယျ။အားလုံးကိုယျစား သူ့ဆီရောကျအောငျသှားတှပေ့ေးနိုငျမယျ့လူတဈယောကျယောကျရှိမယျဆိုရငျ ကြှနျတေျာ့ကိုcbကနေ ဆကျသှယျပေးပါလား ခငျဗြား ! ကြှနျတျောကိုယျတိုငျကလညျး နယျမှာရောကျနလေို့ပါ။သူ့အတှကျ ကြှနျတျော နိုငျတာလေးကူညီပေးရငျး သူပွနျလာရငျ သူနဲ့ရိုကျဖို့ဇာတျလမျးလေးတဈ ပုဒျရှိတဲ့ အကွောငျးမှာလိုကျခငျြလို့ပါ…..။)..” ရေးသားပွောပွထားတာပါ..။ပရိသတျတှကေလညျး ဒါရိုကျတာ သညျခတျေနနေဲ့အတူ ရဲတိုကျအတှကျ ဆုတောငျးစကားတှနေဲ့ အားပေးထားကွတာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။
ဖခင်အရင်းမှ သမီးဖြစ်သူအား ကောက်ရတယ်ဆိုကာ ဂေဟာသို့လာပို့ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ မြန်မာအတွက်နေရာလွတ် တစ်နေရာအမြဲရှိကြောင်း ပြောပြလိုက်တဲ့ Sinon